Elon Musk: "Haddii aanan ku xallin karin dhibaatooyinka tamarta ee Australia 100 maalmood, waxaan ku sameyn doonaa bilaash" | Cusbooneysiinta Cagaaran
Tomas Bigordà | | Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Elon Musk wuxuu jecelyahay caqabadaha waaweyn, haduuna iyaga la joogo wuxuu siin karaa shirkado kala duwan sumcad badan, sidaa si ka sii wanaagsan. Aasaasihii Tesla, ayaa sheegtay inuu awoodo xalliyaan dhibaatooyinka xagga tamarta ee Koonfurta Australia. Iyo sida dalabyada teleshopping-ka ugu fiican, wuxuu hubiyay haddii uusan ku guuleysan inuu ku sameeyo 100 maalmood, inuu gebi ahaanba sameyn lahaa. free.
Sida la wariyey The Guardian-ka, soo jeedintiisu waxay umuuqataa mid hami iyo awood leh oo ku qancisa Mike Cannon-Brookes, oo ah aasaasaha Australia ee Atlassian, Waxaan weydiiyay sida ay dhab uga tahay iyada. Ugu dambeyntiina kadib markii ay bixiyeen macluumaadka haddii aysan ku helin boqol maalmood gudahood inay bilaash ku sameyn doonaan, Cannon-Brookes waxay u sheegtay Musk inuu sugo toddobaad si uu isugu dayo inuu xalliyo arrimaha siyaasadeed iyo kuwa maaliyadeedba ayna la hadli doonaan .
Koonfurta Australia waxay ku dhex daadsan tahay a dhibaato weyn oo xagga tamarta ah, mana muuqato in dowladda dhexe iyo dowlad-goboleedyadu ay ku dhow yihiin inay xalliyaan. Waxay la kulmayeen koronto la’aan illaa bishii Sebtember ee sanadkii hore, kaasoo sababaya dagaal siyaasadeed oo sii kordhaya kaas oo dowladda federaalku ku eedeyneyso tamarta la cusbooneysiin karo dhammaan cudurrada. Hawlwadeenka Suuqa Tamarta ee Australiya isagoo hubinaya in korantadan ay sabab u tahay arrimo kala duwan, sida dalabyo tamar sare oo lama filaan ah.
1 Tesla badbaadinta
@macannonbrookes Tesla wuxuu nidaamka ka rakibayaa kana shaqeynayaa 100 maalmood saxiixa qandaraaska ama waa lacag la'aan. Taasi dhab ahaan kugu filan?
- Eeloon Miski (@elonmusk) 10 Maarso 2017
Ka soo horjeedka taariikhdan, Tesla VP ee Waxyaabaha Tamarta, Lyndon Rive, ayaa ku dhawaaqay khamiistii la soo dhaafay Dib-u-eegista Maaliyadeed ee Australiya in shirkadiisu xallin karto dhammaan dhibaatooyinka tamarta ee Koonfurta Australia boqol maalmood gudahood haddii ay weydiiyaan iyada oo ay ugu mahadcelinayaan xawaaraha wax soo saar ee ay ku gaari karaan iyaga Nevada Gigafactory. Xaqiiqdii, wuxuu sheegay inuu ballanqaadi karo inuu rakibo baytariyada 100-300 megawatt-saac ee lagama maarmaanka ah.
Marka la eego hadaladan, aasaasaha Attlasian Mike Cannon-Brookes ayaa weydiiyay Rive iyo Elon Musk barta Twitterka sida ay ugu culus yihiin soo jeedintan. Jawaabta Musk waxay ahayd mid si dhab ah u jirta haddii aysan iyagu haysan nidaamka lagu rakibo iyo shaqeynaya 100 maalmood gudahood laga bilaabo saxiixa heshiiska waxay ku wada sameyn lahaayeen lacag la'aan. Miyuu kugu filan yahay adiga? Musk ayaa ku kaftamay.
@macannonbrookes $ 250 / kWh heerka xirmada ee 100MWh + nidaamyada. Tesla wuxuu u guurayaa qiime go'an oo furan iyo shuruudaha dhammaan alaabooyinka.
Jawaabta Canon-Brokes waxay ahayd mid xoog leh, oo weydiisatay inuu siiyo qiimayaasha qiimaha ku dhow, una sheegto inuu sugo toddobaad inta uu isku dayay inuu qaado talaabooyinka lagama maarmaanka u ah siyaasada iyo miisaaniyada si uu Tesla isku dayo inuu la kulmo loolankiisa. Haddii uu guuleysto, Tesla wuxuu ku guuleysan lahaa qandaraaskiisa xiga mahadnaq dhammaantiis ama waxba kuma laha shabakadaha bulshada.
Xilligan Tesla ma haysto 300 MWh baytariyaal diyaar ah, taas oo ah awoodda ugu badan ee uu sheegay Rive, laakiin madaxweyne ku xigeenka shirkadda ayaa rajo wanaagsan ka leh in la awoodo in lagu diyaariyo waqtiga loo qabtay haddii ay aakhirkii go’aansadeen inay iyaga ku tiirsanaadaan. Caqabaddii ugu dambeysay ee la mid ah shirkadda Musk waxay ahayd inay ku rakibto 80 MWh beer batroolka Koonfurta California muddo 90 maalmood gudahood ah oo ay ku baxayso $ 100 milyan.
Dhaqdhaqaaqyadani waxay aad ugu habboon yihiin maskaxda Elon Musk, oo ah ganacsade u heellan kor u qaadida tamarta la cusboonaysiin karo iyo lacag ka sameynta mashruucyo caawiya kuwa kaleLaga bilaabo xalinta dhibaatooyinka taraafikada adoo dhisaya tunelo (HyperLoop) ilaa aad dib ugu celiso nin dayaxa (SpaceX). Weli waa la arki doonaa haddii dawladda Australiya ay ugu dambayn ku kalsoon tahay Tesla iyo haddii ay ballanqaadkooda dhawraan iyo in kale.
Hyperloop waa magaca ganacsi ee u diiwaangashan shirkadda gaadiidka aerospace SpaceX, ee loogu talagalay raacida rakaabka iyo alaabada tuubbooyinka faaruqinta oo xawaare sare ku socda.
SpaceX waxaa aasaasay bishii Juun 2002 Elon Musk si uu u beddelo tiknoolajiyadda hawada sare, iyada oo ujeeddada ugu dambaysa ay tahay u oggolow dadka inay ku noolaadaan meerayaasha kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Elon Musk: "Haddii aanan ku xallin karin dhibaatooyinka tamarta ee Australia 100 maalmood, waxaan ku sameyn doonaa si bilaash ah"
isaac van rysselberge dijo
markii warkan la daabacay
Ka jawaab isaac van rysselberghe